I-Samsung Galaxy Note 8 ayiseseyimfihlo: zonke izinto zayo zihluziwe | Iindaba zeGajethi
I-Samsung Galaxy Note 8 ayiseseyimfihlo: zonke izinto zayo zihluziwe
URuben inyongo | | ngokubanzi, Iiselfowuni
I-Samsung yaseKorea ibongoze imithombo yeendaba ekhethekileyo kumsitho we-23 ka-Agasti. Kulindelwe ukuba iflegi elandelayo yenkampani iza kuziswa ngokusesikweni, ngokubhekisele kwiifowuni eziphathwayo. Oko kukuthi, i I-Samsung Galaxy Note 8. Nangona kunjalo, sele siyazi ukuba umhlaba wokuvuza usebenza njani kwaye ngakumbi kwicandelo lobuchwephesha: imfihlo ayisasebenzi njalo.
Njengoko kuhlala kusenzeka, umhleli we-portal Beat Venture, U-Evan Blass waziwa ngcono njenge @evleaks kwi-Twitter, Ufumanise kwangaphambili zonke iimpawu ze phablet kwiSams. Unako ukufikelela kulwazi lokuqala kwaye i-Samsung Galaxy Note 8 ikhutshwe kwangoko. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ulindele ntoni kuye ngo-Agasti 23? Ewe, qhubeka ufunda.
1 Isikrini esikhulu kune-Samsung Galaxy S8 +
2 Amandla okutshatisa iflegi
3 Ibhetri ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nexabiso alifanelekanga kuzo zonke iipokotho
Isikrini esikhulu kune-Samsung Galaxy S8 +
Umhleli ofanayo otyhila iinkcukacha zobuchwephesha besiphelo esaziwayo seSamsung echaze imifanekiso ethile yeendaba kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Kuzo ungabona i-terminal enezakhelo ezibhityileyo; nge umboniso onqamlezileyo kwaye, ewe, ibonise i-S-Pen edumileyo okanye ipentiki Usapho lwenqaku.
Ewe, ukuze uchaze ngcono le mifanekiso siza kukuxelela ukuba i-Samsung Galaxy Note 8 iya kuba nescreen esikhulu; idiagonal enkulu kunaleyo ifunyenwe kwi Samsung Galaxy S8 +. Sithetha nge Iscreen se-6,3-intshi ngesisombululo seepixels ezingama-2.960 x 1.440.
Amandla okutshatisa iflegi
Okwangoku, emandleni ikwasebenza kakuhle: kuluhlu lwe-S8, I-Samsung Galaxy Note 8 iya kuxhobisa iprosesa yasekhaya ye-Samsung Exynos 8895 kunye neQualcomm Snapdragon 835 —Elokugqibela kuphela eUnited States. Ezi chips ziya kudityaniswa nge-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina yangaphakathi esinokuthi siyonyuse ngokusetyenziswa kwamakhadi e-MicroSD.
Kwakhona, ukuba ubuzibuza, ewe, i-Samsung Galaxy Note 8 iya kuba nekhamera ezimbini ngasemva. Ngokukodwa, iya kuba malunga ezimbini ze-12 megapixel sensors ngokuzinza okubonakalayo. Injongo yayo? Ewe, oko sele sikwazi kwezinye iimodeli kwintengiso: ukuphinda wenze isiphumo esidumileyo se-bokeh. Ewe kulindeleke ukuba le khamera ikwazi ukusingatha imigangatho yevidiyo yamva nje. Ngeli xesha, ngaphambili siza kudibana nekhamera ye-8 megapixel.
Ibhetri ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nexabiso alifanelekanga kuzo zonke iipokotho
Ukugqibela kweempawu ezivuzayo ngumthamo webhetri yesiphelo. Oku kuya kuba nakho 3.300 milliamps kwaye iya kuhlawulisa ngezibuko le-USB-C okanye ngokungeniswa; Oko kukuthi, ixhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo.
Ngoku, ukuba ubukhathazekile ngexabiso le-Samsung Galaxy Note 8, ewe, ayizukubiza ngexabiso kwaphela. Kwaye oko ngokutsho kweBlass kutyhila, el phablet iya kuba nexabiso elikufutshane ne-1.000 euro. Ixabiso elingasothusi kweli candelo leefowuni eziphathwayo kwaye umzekelo, ezo zihlawulelwa ii-mobiles zeApple. Okokugqibela, i-terminal inokuthengwa ngee-shades ezahlukileyo: mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, ngwevu kunye negolide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Samsung Galaxy Note 8 ayiseseyimfihlo: zonke izinto zayo zihluziwe
Imodeli yeTesla Y inokufika kwangoko
UHuawei ujongene neApple kunye ne-Samsung kwaye kungekudala uza kubafumana